Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » South African Airways waxay ku soo noqonaysaa cirka 23 -ka Sebtember
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
South African Airways ayaa wajigeeda hore ka duuli doonta Johannesburg ilaa Cape Town, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka iyo Maputo.
South African Airways ayaa dib u bilaabi doonta shaqadeeda bisha September 2021.
SAA waxay ahaan doontaa sii-haye ammaan ah oo u hoggaansan borotokoolka COVID-19.
SAA waxay dib u bilaabi doontaa kiis ganacsi oo aad u xun.
Sugitaankii ayaa ugu dambayntii dhammaaday. Muddo bil gudaheed ah, shaqo -joojinta caanka ah ee shirkadda South African Airways (SAA) ayaa mar kale ka muuqan doonta cirka iyadoo ay shirkaddu dib u bilaabi doonto hawlaheedii. Xamuulka ayaa xaqiijiyay in duullimaadyadii ugu horreeyay ay bilaaban doonaan Khamiista, Sebtember 23, 2021. Tigidhada ayaa la iibin doonaa Khamiista, 26ka Ogosto 2021. Booqashada Voyager iyo furashada Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta ee Safarka ayaa la heli doonaa laga bilaabo Isniinta, 6 Sebtember 2021.
Maamulaha KMG ah ee South African Airways Thomas Kgokol
Maamulaha Kumeelgaarka ah Thomas Kgokolo ayaa leh, “Kadib bilo shaqo adag, waxaan ku faraxsanahay in SAA ay dib u bilawdo adeegii waxaana rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno rakaabkayada daacadda ah oo ka babanaya calanka Koonfur Afrika. Waxaan sii wadnaa inaan nahay side ammaan ah oo u hoggaansan xeerarka COVID-19. ”
South African Airways wuxuu wajiga hore ka bilaabi doonaa duulimaadyada Johannesburg ilaa Cape Town, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka iyo Maputo. Goobo badan ayaa lagu dari doonaa shabakadda marinka iyada oo kor u qaadaysa hawlgallada iyada oo laga jawaabayo xaaladaha suuqa.
Kgokolo wuxuu raaciyay, "waxaa jira dareen qoto dheer oo xamaasad leh oo ka dhex jira Kooxda SAA markaan isu diyaarinayno duullimaadka, oo leh hal ujeedo guud -inaan dib u dhisno oo aan sii wadno diyaarad faa'ido leh oo mar kale qaadata kaalin hoggaamineed ee shirkadaha maxalliga ah, kuwa qaaradda, iyo kuwa caalamiga ah."
Xusuus -qorka Kgokolo, “Waaxda duulista ayaa hadda maraysa xilli tijaabo ah, waxaanan ka warqabnaa caqabadaha adag ee horyaalla toddobaadyada soo socda. Waxaan uga mahadcelineynaa Koonfur Afrika taageerada aan ka helnay in nala gaarsiiyo halka aan maanta joogno. Maaddaama aan hadda diyaar u nahay inaan duulimaadno, waxaan u aragnaa inay tani tahay guul weyn oo u soo hoyatay SAA iyo
Sida laga soo xigtay gudoomiyaha gudiga SAA, John Lamola, tan iyo markii qaade qaranku ka soo baxay badbaadinta ganacsiga dhamaadkii Abriil 2021, Waaxda Ganacsiga Dadweynaha oo ay weheliyaan Guddiga iyo kooxda Maareynta ayaa lagu qabtay qorshe dib loogu bilaabayo dib -u -habayn iyo ku habboon ujeeddo
diyaarad ay dadka Koonfur Afrika mar kale ku faani karaan. Lamola ayaa tiri: “Shirkaddu waxay dib u bilaabi doontaa kiis ganacsi oo aad u xun”.
Cuthbert Ncube, gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB), ayaa yiri markii la helay warka, in Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu ku faraxsan yahay inuu arko South African Airways oo dib u bilawday hawlaheedii kuna soo noqonaysa cirka. Soo noqoshada ciyaaryahan weyn oo heer gobol iyo caalami ah sida South African Airways ganacsiga ayaa muhiim u ah warshadaha dalxiiska ee qaybta koonfureed ee Afrika inay dib u bilaabaan oo ay ka bilaabaan ka soo kabashadooda dhammaan waxyeelladii ka soo gaadhay masiibada adduunka ee COVID-19.